Print Peppermint – Kaararka Ganacsiga ee Caadiga ah & Alaabta Daabacaadda
Gawaarida la keydiyay
La-tashi Hal-abuur Bilaash ah
Ballanqaad 20 daqiiqo ah wac Austin, Agaasimaha Hal-abuurka, si aad ugala hadasho mashruucaaga.
Ballan qabso >
Dalbo Xirmooyin Muunad ah
Waxaa ka buuxa in ka badan 25 muunado yaab leh oo ah mashruucyo dhowaan la dhameeyey.
Dalbo xirmo muunad>
Dhammaan Kaararka Ganacsiga
Kor U Qaaday Spot Gloss
Birta birta ahHot
Geedo Midabo leh
Adeegga Naqshadeynta Kaarka Ganacsiga
Habeeyaha Kaadhka Gaarka ah
Ku xidho kaadhka ganacsi ee caado u ah inta aad awoodid
Tusaalooyinka Hal-abuurka Duur-joogta ah!
Waxaa ka buuxa in ka badan 25 muunado yaab leh oo waraaqo kala duwan ah iyo dhammayn gaar ah.
Isku xidhka kaadhadhka boostada ee gaarka ah
Dhis kaarka boostada ee riyadaada adiga oo habaynaya sifo kasta.
Habee kaaga Hadda >
Kaadhadhka Boostada ee Faylka ah ee kor loo qaaday
Qabo dareenka dammaanad qaadka leh bireedkan kor loo qaaday ee dahabka, qalinka, ama holo!
Iibso kaadhadhka Boostada ee Foolka Sare >
U ogolow kaadhadhka ganacsigu inay tusaan qof kasta oo aad halkan u joogto si aad ganacsi dhab ah u samayso. Dhammaystir gaar ah oo aan dhammaad lahayn, cabbirro, iyo kayd waraaqo qaali ah.
Dukaan Kaararka Ganacsiga ee Caadiga ah
Istiikarrada & Calaamadaha
Ku dheji astaantaada meel kasta! Istiikarada iyo calaamaduhu waa madadaalo aad u xiiso badan laakiin waa hab wax ku ool ah oo looga tago calaamad la'aanta laguna calaamadiyo isla markiiba.
Dukaan Istiikarada Gaarka ah & Calaamadaha
Nolosha waxaa loo sameeyay in la xuso! Dalbo casuumadaha gaarka ah, ogeysiisyada iyo wax ka badan si aad u xusto waqtiyadaada gaarka ah.
Casuumaad Dukaan & Qalab Qoraal
U deji codka astaantaada daabacaadda daabacaadda deboss ee caadada u ah Pantone midabyo, oo lagu daabacay warqad suuf ah oo jilicsan laakiin dhumuc weyn leh.
Dukaan Daabacaadda Warqadaha
Kaararka Boostada gaarka ah
Ku ogeysii warkaaga gaarka ah macaamiishaada ama saaxiibadaa waraaqo dhammays ah oo kala duwan, cabbiro, iyo dhammays gaar ah.
Iibso kaararka Boostada ee gaarka ah
Kaararka Ganacsiga ee Birta
Samee bayaan geesinimo leh adiga oo u dhiibaya macmiilkaaga cusub kaadhka ganacsi ee birta aan fiicnayn ee aadka u adag.
Dukaan Kaararka Ganacsiga Birta
Calaamadaha & Boodhadhka
Dharka & Bacaha
Fikrado cusub oo ka yimid Blog Design
Sida Loo Horumariyo (Una Ilaaliyo) Codka Summadaada
Aasaasidda nooca codka ah ayaa muhiim u ah istaraatiijiyad kasta oo suuqgeyn ganacsi ah. Joogteynta cod sumadeedka joogtada ah waxay kaa caawinaysaa in aad wax badan oo ku saabsan ganacsigaaga la xidhiidho dhagaystayaashaada. Intaa waxaa dheer, waxay ka dhigaysaa inay si fudud ula xiriiraan ganacsigaaga, taasoo ka dhigaysa shay faa'iido leh oo lagu dhisayo ganacsi guuleysta. Halkan waxaa ah hage tallaabo-tallaabo ah oo ku saabsan sida loo… Akhri wax dheeraad ah
5-ta aalad ee ugu sareysa ee loogu badalo sawirada faylalka qoraalka
Aaladaha OCR ee intarneedka ah ayaa si cajiib ah u soo kordhinaya hub-qoraa kasta maanta. Marka, sidee iyo kuwee waa inay isticmaalaan 2022? U beddelashada sawirrada qoraallo la tafatiran karo waa wax aad u soo kordhinaya ganacsi kasta ama kaydka qoraaga. Aaladahani waxay nolosha u fududayn karaan iyagoo u beddela sawirrada qoraallo la tafatiran karo si mustaqbalka loo isticmaalo iyo in ka badan. Sida laga soo xigtay… Akhri wax dheeraad ah
10 Talo oo loogu Sameeyo Fiidiyow Xirfad-yaqaan ah oo Bilowga ah
Sawirka: Sheeko dhexmarta Freepik Sida laga soo xigtay cilmi-baaris, waxa ku jira muuqaalku wuxuu ka dhigayaa 82% taraafikada intarneedka sanadkan. Taasi waxay la macno tahay qaar badan ayaa ku raaxaysan daawashada fiidiyowyada marka ay baadhayaan internetka oo ay helaan macluumaad cusub. Laakiin waa maxay sababta ay aad u jecel yihiin fiidiyowyada? Fiidiyowyadu aad ayaa loo heli karaa sababtoo ah isticmaalayaashu waxay si fudud u wadaagi karaan waxa ku jira farahooda. … Akhri wax dheeraad ah
Naga hel bulshada
Ku biir Talooyin Nakhshad & Dhimista Gaarka ah
Fadlan nambar ka soo qor 10 ilaa 10.
Waa maxay 6 + 4 ?
Hel dhimis & Bixinta Sirta ah!
Ku soo biir warsideheenna oo $ 10 ka qaad dalabkaaga koowaad.
Xuquuqda daabacaadda 2022 - Print Peppermint Inc.
Websaydkani waxay isticmaashaa cookies si loo wanaajiyo khibradaada Waxaan kugula talinaynaa in aad arrintaan saxan tahay, laakiin waad ka-bixi kartaa haddii aad rabto.OgolaanshahaDiido Read More
Geli cinwaanka gaadhiga
Cinwaanka ayaa loo baahan yahay
La wadaag Gaarigaaga
Gaariga waa la bedelay
Soo gal marka hore si aad u kaydsato gaadhiga